အစ်မခင်မင်းဇော်ရဲ့ ကယန်းအကြောင်းဆောင်းပါး | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
အစ်မခင်မင်းဇော်ရဲ့ ကယန်းအကြောင်းဆောင်းပါး	Posted by mm thinker on July 5, 2008
Posted in: Article, Karenni, Kayan, Research, Sharing.	Tagged: Article, Karenni, Kayan.	1 Comment
အစ်မခင်မင်းဇော် တင်ပေးတဲ့ ပို့စ်ကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ Rate this:Share this:EmailTwitterFacebookPrintRedditLike this:Like Loading...
← လူမျက်နှာပျောက်တဲ့ လူသားတွေ	ထာဝရဘုရားသခင် အယူအဆ – ဣဿရ နိမ္မာန၀ါဒ (Concept of God) →	One comment on “အစ်မခင်မင်းဇော်ရဲ့ ကယန်းအကြောင်းဆောင်းပါး”